Amakhadi Ezipho wamahhala we-Amazon (Novemba. 2020) - Amakhodi Asebenzayo - Ukudlala
Ungawathola kanjani amakhadi wesipho samahhala we-amazon? Lo ngomunye wemibuzo evame ukubhuza kakhulu ezingqondweni zabathandi bezitolo be-amazon. Ngakho-ke nazi izimpendulo. Ukuthenga sekuvele kungumsebenzi okhulula kakhulu kubantu abaningi emhlabeni jikelele. Kungenziwa kukhululeke kakhudlwana, kujabulise, futhi kujabulise uma uthola amakhuphoni amahhala noma amakhadi wesipho ukuthenga izinto ozifunayo.
Amakhadi ezipho e-Amazon angasetshenziselwa ukuthenga izinto ezahlukahlukene ophuphe ngazo, kufaka phakathi okuqukethwe kwe-kindle, umculo wedijithali, nemidlalo yevidiyo. Amakhadi ezipho e-Amazon angakusiza ukuthi uthenge noma yini ohlela ukuyithenga. Kukusiza ukubalekela ukuqhuma okuningi. Ungathenga izinto ngaphandle kokukhokha imali oyiholayo ejwayelekile.
Ungawathola kanjani amakhadi wesipho wamahhala we-Amazon? Lo mbuzo kumele ube ukhohlisa ingqondo yakho, kepha ngeke sikuvumele ulinde okuningi. Lo mbhalo ubhalwe ngokukhethekile ukukusiza ukuthi ufinyelele kumakhadi wesipho samahhala we-amazon ngezindlela ezilula nezethembekile.
Thola amakhodi wamahhala we-PSN
Izindlela ezi-23 ezihamba phambili zokuthola amakhadi wesipho wamahhala we-Amazon:
Okulandelayo izindlela ezingamashumi amabili nantathu zokuthola amakhadi wesipho samahhala we-amazon
1. Amaphuzu Okuphila
ILife Points ingesinye sezindawo ezihlaba umxhwele kakhulu zokuthola imivuzo efaka amakhadi ezipho e-amazon futhi inamalungu angaphezu kwezigidi ezingama-500 emhlabeni jikelele. Umsebenzisi kufanele enze izinhlolovo ezithile ezimnandi mayelana nama-movie noma izindaba zamanje.
Ngaphandle kokuthola amakhadi ezipho, ujabulela izimemo zawo futhi nokuqhubekisela phambili ukuhlolwa komkhiqizo.
UToluna ungenye yezinhlolovo ezithandwa kakhulu ngezikhathi ezithile kanye nengosi yezokuxhumana engasebenzi ngezikhathi ezithile. Yenza ukuhlolwa komkhiqizo okuningi futhi isiza abasebenzisi bayo ukuthi bahlanganyele namanye amalungu ukwakha ubudlelwano obukhangayo, obujabulisayo ngokudlala imidlalo nabanye.
Ungawavuza kalula amaphuzu owatholile ngamakhadi wesipho e-Amazon.
Ngalesi siza esihle, umsebenzisi angathola kumasekhondi ayishumi. Kukhokhela ukubuka izikhangiso ezahlukahlukene, izivivinyo ezahlukene zomkhiqizo, kanye nohlolo. Umvuzo oshibhile ku-PrizeRebel uyikhadi lesipho lamadola amabili.
I-Yougo ingenye yezindlela ezithandwa kakhulu zokuthola imiklomelo. Leli sayithi likhokha amadola angamashumi amabili njengomvuzo wokwamukela. Kukusiza ukuthi uzuze ngokukubuza imibono yakho mayelana nama-movie, izindaba zamanje nezinye izinto ezingaba nentshisekelo kuzo.
Imvamisa, ucwaningo lukukhokhela ibhonasi yamaphoyinti angama-250, futhi ungakhipha imivuzo yakho lapho ifinyelela ebhalansi lamaphoyinti angama-500. Amaphuzu angama-500 alingana nama-dollar angama-50, okuyimali enobungani impela ukukusiza ukuthi uthenge ezinye izinto ku-amazon.
Ungasebenzisa imivuzo yakho ngamakhadi wesipho e-Amazon, okuyisizathu esibalulekile obheke lapha.
5. IHarris Poll
Indawo yokuhlola i-Harris poll ingenye yezinkampani ezindala kakhulu zocwaningo. Benza ucwaningo oluhlukile ngemikhuba yabathengi kanye nemicimbi eyenzekayo njengamanje. Abagcini nje ngokukukhokhela ngemivuzo engatholakala ngamakhadi wesipho semali noma we-amazon kepha futhi uthola ukungena kumadilowa wabo wemali. Ungaba yinhlanhla yokuwina umklomelo wemali.
Umbandela owodwa wokuba yingxenye yocwaningo lwe-harris poll ukuthi umsebenzisi kumele abe neminyaka eyishumi nesishiyagalombili ubudala noma ngaphezulu. Ngakho-ke, uma ungumuntu osemusha, ongaphansi kweminyaka eyishumi nesishiyagalombili ubudala, khona-ke kufanele ubheke ezinye izindlela esikunikeze zona zokuthola amakhadi wesipho samahhala we-amazon.
Isithandwa sekhadi lesipho le-Amazon! Ama-Swagbucks inezindlela ezijabulisayo nezijabulisayo zokukusiza ukuthi uthole amakhadi wesipho samahhala we-amazon wemisebenzi ethokozisayo neqondile. Leli sayithi likhokhela abasebenzisi balo ngokubuka imidlalo yevidiyo, ukusesha iwebhu, nokwenza izitolo online.
Izinkokhelo zayo ziyaheha njengoba zikukhokhela ngomklomelo wamadola amahlanu nje kuphela ngokubhalisela. Ungathola amakhadi wesipho samahhala we-amazon ngokuphequlula ama-swag bucks nsuku zonke. Siphakamisa ukuthi ungaphuthelwa yithuba.
Kuyindlela enhle kakhulu yokuthola amakhadi wamahhala we-amazon nokuhola nemiklomelo yemali nayo. Yaqala yaqala ngokuthenga esitolo, kepha manje inwebekile ukukhokhela abasebenzisi bayo ngokuthenga cishe noma yini etholakalayo. Ayikhokhi ngokuthenga nge-inthanethi kuphela kodwa futhi nangokuthenga ezitolo. Ikunika nemihlane yemali futhi.
Inezindlela eziningi zokwenza abasebenzisi bayo bahole kaningi ngayo njengoba ikukhokhela amadola amahlanu ngokumema abangani bakho, okuyinto ejabulisa impela. I-Ibotta ifana namandla okuthenga ama-creepers. Kwenza abasebenzisi abakhathele bathuthukise ngokuthumela abanothando ngamaphuzu. Amaphuzu angahlengwa ngamakhadi wesipho e-Amazon, into obukade uyifuna.
8. Drop App
Kuyinto uhlelo lokusebenza oluhle lokubuyisa imali. Ubhalisela iDrop App bese ungeza abathengisi bakho abahlanu obathandayo. Kufanele uxhumanise ikhadi lakho lesikweletu noma lasebhange, futhi, ukuze wenze izinkokhelo ngokuthenga kwakho online. Kukho konke ukuthengwa oku-inthanethi ngalolu hlelo lokusebenza, uthola amaphuzu noma amaconsi angahlengwa ngamakhadi wesipho e-Amazon.
Ikhokha amadola amahlanu ngokusayina kuphela nokuxhumanisa ikhadi lesikweletu noma lasebhange njengebhonasi eyamukelekile. Siyethemba ukuthi manje sibukeka sihlakaniphile kuwe njengoba siphendula ngokwanele embuzweni wakho okhungathekisayo: ungawathola kanjani amakhadi wesipho samahhala we-amazon? Ukuqhuma!
Uthanda amakhadi wesipho samahhala we-amazon kepha uvilapha kakhulu ukwenza ukuhlolwa komkhiqizo nokuhlola? Ngemuva kwalokho yeka ukukhungatheka njengoba i-InstaGC yethule ukukukhipha esithukuthezi sakho futhi inezindlela ezinhle zokuthola amakhadi wesipho samahhala we-amazon.
I-InstaGc isiza abasebenzisi bayo ngokubuka amavidiyo, ukudlala imidlalo yevidiyo, noma ukuphequlula iwebhu ukuthola imivuzo. Imivuzo ingahlengwa ngokuwathengisela kumakhadi wesipho e-Amazon.
10. Inhlokodolobha Yomuntu
Imali yomuntu siqu wuhlelo lokusebenza lwezezimali olusiza ukuphatha izimali zakho. Ivumela abasebenzisi bayo ukulandelela ukutshalwa kwezimali kwabo, ukuhamba kwemali, amabhajethi, kanye nokuthatha umhlalaphansi.
Kepha kungani ubheka kuwo?
Kukhona okukufanele? Yebo, ngeke ukholwe ukuthi izinto zingaba lula kanjena. Imali yomuntu siqu ikukhokhela ngamakhadi wesipho ama-amazon angamashumi amabili wamadola ukusayinela i-Personal Capital.
Ngakho-ke, phuma ezindaweni futhi usheshe ngokufuna ikhadi lakho lesipho le-amazon lamadola angamashumi amabili.
Ama-Inboxdollars akhokhe imali efinyelela ezigidini ezingamashumi amahlanu nesithupha kumalungu awo kusukela ngonyaka ka-2000. Bathatha ucwaningo maqondana nabathengi kusuka emizuzwini emithathu futhi bangaba yimizuzu engamashumi amabili nanhlanu. Imvamisa, bakhokha phakathi kwamadola ayi-0.5 kuye kwayi-5 kepha bangaya ngaphezu kwama-dollar angama-20 uma bethola ithagethi okungenzeka bayayifuna.
Futhi banokukhetha kokuhola njengokubuka amavidiyo wezinqola ze-movie noma ukufunda ama-imeyili wokuphromotha noma ukuhlenga amakhuphoni wamahhala. Zikusiza ukuthi uhlenge imivuzo yakho ngamakhadi wesipho e-Amazon.
12. Ibutho Lombono
Futhi kuyisayithi elihle lokuthola amakhadi wesipho wamahhala we-Amazon. Imane icele abasebenzisi ukuthi benze izinhlolovo ezidingekayo. Imvamisa, ucwaningo lufinyelela kumizuzu eyishumi noma eyishumi nanhlanu.
Ikhokha imivuzo yakho engahlengwa ngqo ngamakhadi wesipho semali noma we-amazon.
I-Survey monkey isikhathalela kakhulu isikhathi namandla abasebenzisi bayo. Njengoba izindawo eziningi zokuhlola zithatha imizuzu engamashumi amabili noma ngaphezulu ukuqedela inhlolovo, inkawu yocwaningo ize phambili ukuze ikwenzele amaphuzu ngocwaningo oluthatha imizuzu emihlanu noma ngaphansi kwalokho.
Ngemuva kokubhalisa kwakho, inhlolovo yayo yokuqala ukwazi intshisekelo yakho ukuze ungalokothi ukhungatheke ngokuzayo ngenkathi uphendula noma yisiphi isifundo. Ikucela izinhlolovo ezifana nephrofayili yakho.
Kwenza kube mnandi futhi kutholakale umvuzo. Ungakhipha imivuzo yakho ngamakhadi wesipho se-amazon noma wenze usizo lapho amathiphu akho ekhuphukela enanini lamadola amahlanu.
I-Ipoll iza nesiqubulo sokuthi bayayithanda indlela abasebenzisi babo abacabanga ngayo-behlonipha ngokuphelele futhi bencoma? Ukuqhuma! I-Ipoll yindawo yokuhlola kanye nesicelo esenza ucwaningo kumikhiqizo nezinsizakalo ozisebenzisa nsuku zonke.
Umuntu angathanda ukwabelana ngombono wakhe ngokuthile okuyingxenye yempilo yansuku zonke. Futhi injabulo eyengeziwe yidrowa lomklomelo wemali lama-dollar ayizinkulungwane ezinhlanu ngekota. Ikhokha abasebenzisi bayo ngemiklomelo, engahlengwa ngokuhweba amaphuzu atholakele kumakhadi wesipho e-Amazon.
15. Ukudlala kwenkungu
Ingabe ungumlutha womdlalo? Ngabe ufuna ukukhokhelwa ngokudlala nje imidlalo yevidiyo? Ngakho-ke nali ithuba lokulandela ukuhola ngokudlala nje imidlalo ngokudlala kabi. I-Mistplay iyisayithi lokuthola umvuzo lapho udlala khona imidlalo yevidiyo bese uqedela ukuthenga okungaphakathi kwemidlalo.
Amaphuzu abizwa ngamagugu noma amayunithi, kepha angathengiswa ngamakhadi wesipho se-amazon. Siphakamisa ukuthi abadlali bamageyimu bangaphuthelwa yileli thuba lokuthola amakhadi wesipho samahhala we-amazon.
16. Ukubuyekezwa kwenhlanhla
It is a lokusebenza kumnandi kokubili abasebenzisi Android kanye iOS. Kuyasiza abasebenzisi ukuklwebha cishe amathikithi e-lottery. Kukunika amathokheni wokudlala imidlalo eminingi noma amakhadi wesipho nemiklomelo yemali. Amakhadi ezipho afaka amakhadi ezipho e-Amazon, nemiklomelo yemali ingaba phakathi kwamadola amabili iye kufinyelela kwangama-dollar ayikhulu nanhlanu.
Ukuze ube ngumsebenzisi oqeqeshiwe futhi uwine amathokheni ku-Lucktastic Review, ungazisiza ngokubhekisa abangani bakho kuleli sayithi ngokumane ubheke kusixhumanisi sakho sokudlulisela. Ekudlulisweni ngakunye, uthola amathokheni ayinkulungwane.
I-App nana iyipulatifomu ethokozisayo yokukusiza uzuze imivuzo ngokwenza imisebenzi eqondile. Imisebenzi ifaka ukungena kule sayithi nsuku zonke, ukuyigcina ivulekile isikhathi esithile, ukulanda imidlalo ethile noma izinhlelo zokusebenza, nokuyigcina itholakalela isikhathi esithile noma ukuqedela amazinga athile. Kukhokhela nokubuka izikhangiso.
Amaphuzu owatholayo aziwa njengama-nanas, futhi angaguqulwa abe yimali noma amakhadi wesipho we-amazon. Ungakhetha noma yiziphi izindlela zokujabulela izinkokhelo zakho ngokwenza imisebenzi elula. Kungunoma iyiphi enye indlela emfushane yokufinyelela amakhadi wesipho samahhala we-amazon.
IRakuten yindawo elula futhi ezuzisa kakhulu yokubuyisa imali. Ibuyisela emuva kuze kufike kumaphesenti angamashumi amane imali ebuyiswayo ngokuthenga nge-inthanethi nge-portal yayo.
Le ndlela yizinyathelo ezimbalwa ezilula.
Iya kungosi yeRakuten kuqala.
Khetha umthengisi ofuna ukuthenga kuye.
Khetha amakhuphoni uma kukhona ofisa ukuwasebenzisa.
Uma uthenga ngempumelelo, uzothola ukubuyiselwa kwemali okuthunyelwe ku-akhawunti yakho yeRakuten.
Ungasebenzisa imali ngokuthenga amakhadi wesipho e-Amazon.
Kunezindlela eziyisishiyagalombili zokwenza imali ngokuthenga isitolo, ezinikezwa abasebenzisi bayo. Kuyasiza abasebenzisi ukuthi bathole ukukhahlela, okungamaphuzu ngokuvakashela izitolo eziku-inthanethi, ukubuka imikhiqizo ehlukile online, futhi, okubaluleke kakhulu, ukuthenga.
Kuyasiza nokukukhokhela ngokubuka amavidiyo kuphela. Akudingeki nokuthi ubeke noma yikuphi ukugxila kulokho. Vele ujabulele ukudla okulula ngenkathi upheqa amavidiyo futhi ushiye ifoni yakho phezu kwetafula.
Siyethemba ukuthi bekuwumqondo okhohlisayo ukunigcina nonke ezindaweni zenu zokunethezeka nokwenza kube lula kini ukuthola amakhadi wesipho samahhala we-amazon.
Uju yisiphequluli esandisiwe esonga imali kakhulu esisiza abasebenzisi baso ukuthi basebenzise imali ngokuzisebenzisa ngokuzenzakalela ngenkathi bethenga online. Inesici sohlu lokudonsa esimangazayo, esivumela abathengi ukuthi balandele ukwehla kwamanani entengo yenzalo yabo.
Ngaphandle kokonga imali yakho ngokusebenzisa amakhuphoni ngokuzenzakalela, futhi kukwenza uthole imivuzo. Imivuzo yegolide yoju ingahlengwa ngokuyithengisa kumakhadi wesipho e-Amazon. Uju luyimpendulo enobungani embuzweni wokuthi ungawathola kanjani amakhadi wesipho samahhala we-amazon.
It is a lokusebenza ongaqondakali abahola. iqhuba ukuthunyelwa kwezimfihlo. Okokuqala unebalazwe okhethelwa kulo ezinye izitolo eziseduze kwakho. Kufanele ubavakashele futhi uthole isibuyekezo seMobee. UMobee, ngobuhlakani bakhe, wamukela noma anqabe impendulo yakho, mhlawumbe emahoreni angamashumi amane nesishiyagalombili.
Ukufeza amaphuzu amaningi, kufanele uhambe ngokuthunywa okuningi ngangokunokwenzeka. Ungawahlenga amaphuzu akho ngokuwathengisela kumakhadi wesipho e-Amazon lapho efinyelela inani eliphansi lamaphoyinti angamashumi amabili nambili.
22. USurvey Junki
ISurvey Junkie inabasebenzisi abacishe babe yizigidi eziyishumi emhlabeni wonke. Igxila kuphela ocwaningweni, njengoba igama lalo liphakamisa. Kukunika inhlolovo ene-timer yokuphothula. Uma usuqedile ngalokho, uthola amaphuzu. Lapho ufinyelela kufinyelela kwinkulungwane, ecishe ilingane namadola ayishumi, lawo maphuzu angahlengwa ngokuwathengisela amakhadi ezipho e-amazon.
ISurvey Junkie iyashesha futhi ayivumeli abasebenzisi bayo balinde ukuhlenga izinkokhelo zabo. Lokhu futhi kungenye yezinketho ezinhle kakhulu uma ufuna izimpendulo zokuthi ungawathola kanjani amakhadi wesipho samahhala we-amazon.
23. Irisidi Hog
Ingabe nawe uyakhetha lapho uthenga? Futhi uyakholelwa ekuzameni izinhlobo ezahlukene? Ngakho-ke, nali ithuba elanele lokuthi uzuze ekuthengeni kwakho okungenzeka ukuthi ukwenzile kusuka noma yikuphi ngokusebenzisa ingulube yokuthola. I-Receipt hog ivumela amakhasimende ayo ukuthi alayishe amarisidi awo okuthenga futhi athole amaphuzu.
Inezindlela ezingeziwe zokuhola futhi. Ungenza ngokubeka imivuzo oyitholile kuma-spins. I-Spins ikuvumela ukuthi uthole amaphuzu amaningi. Ungenza futhi izinhlolovo ukuze uthole ezinye zemali ezengeziwe. Ekugcineni, ungahlenga izinhlamvu zakho zemali ngokuzidayisela amakhadi ezipho ze-amazon.
Lo mbhalo unikeze abacwaningi izindlela eziphawuleka kakhulu zokuthola amakhadi abo ezipho. Zonke izindlela zidinga ukutshalwa kwezimali okungu-zero. Ungalanda izinhlelo zokusebenza bese uvula iziphequluli mahhala. Ngokumane uguqule isikhathi sakho esimnandi ukuthola isikhathi, ungafinyelela kumakhadi wesipho samahhala we-amazon.
Lawa masayithi afaka imisebenzi elula efana nokwenza imikhuba yabathengi nezindaba zamanje, ama-movie, nezinye izinto ezijabulisayo umuntu angathanda ukubuzwa ngazo njengoba abanye bethembisa ukucabangela imibono yakho ezintweni ozisebenzisa nsuku zonke. Ezinye zazo zithakazelisa kakhulu ukuzisebenzisa njengoba zinikela ngokudlala imidlalo, iphakethe le-jumbo labathandi bomdlalo. Zonke azisizi nje ukuthola amakhadi wesipho samahhala we-amazon kepha zivumela ukuthi ukuthenga kwakho kube mnandi kakhulu, kujabulise futhi kujabulise.
Sikholwa ukuthi leli sayithi kufanele libe lusizo kubathandi bezitolo. Ungazama kunoma ngubani wesiza esishiwo ngenhla noma i-App ukukusiza uthole amakhadi wesipho samahhala we-amazon.
Ukuthenga okuhle kwamahhala!
Amakhodi Wokukhuthaza we-YouTube TV 2020
Isizinda seTorrentz2.eu Simisiwe - Ezinye izindlela ezihamba phambili (2020)